२३:४७, १८ नोभेम्बर २०१२ जस्तै गरी पुनरावलोकन
५५ बाइटहरू हटाइयाे , ८ वर्ष अघि
spelling check, replaced: चल जान्छ → चल्छ, ज़ → ज (7), removed: ॉ (6)
०८:५६, ३ अक्टोबर २०१२ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
सा (रोबोट ले थप्दै: br:Danvez-tarzh)
२३:४७, १८ नोभेम्बर २०१२ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सा (spelling check, replaced: चल जान्छ → चल्छ, ज़ → ज (7), removed: ॉ (6))
विस्फोटक रासायनिक पदार्थको मिश्रण हुन्छ, जसलाई हथौड़ेदेखि आघात गर्न वा ज्वालाले छूने, वा विद्युत् स्फुलिंगदेखि एकाएक ऊष्माका विकासका साथ धेरै ठूलो मात्रामा ग्यास बन्नका कारण विस्फोटन हुन्छ। यदि कुनै बंद कक्षमा विस्फोटन हो, त कक्षको देवलहरु छिन्न भिन्न हुन जान्छ।मा लाभकारी विस्फोटक अपेक्षया निष्क्रिय हुन्छन्, ताकि तिनको निर्माण र परिवहन निरापद हो सके। केही विस्फोटक यस्ता हुन्छन् कि पंखदेखि छूनमा पनि ती विस्फुटित हुन्छन्। यस्ता विस्फोटक कुनै उपयोगी कामका छैनते। उपयोगी विस्फोटकहरुमा केही उच्च विस्फोटक हुन्छन् र केही सामान्य वा मंद विस्फोटक। यो विभेद तिनको सुग्राहिताका आधारमा गरिंदैन, तर तिनको छिन्न भिन्न गर्ने क्षमतामा गरिन्छ। केही विस्फोटक, जस्तै मर्करी फल्मिनेट तथा लेड ऐज़ाइडऐजाइड (Lead azide), जो ठूला सुग्राही हुन्छन्, प्राथमिक विस्फोटकका रूपमा न्यून सुग्राही विस्फोटकका विस्फोटनमा उपयुक्त हुन्छन्। केही प्रमुख विस्फोटक यी हुन्:
1. [[डायनामाइट]] -- तीव्र—तीव्र विस्फोटक, शान्तिकालका लागि
2. [[विस्फोटक जिल्लाहरुटिन]] -- तीव्र—तीव्र विस्फोटक, शान्तिकालका लागि
3. [[टीएनटी]] (TNT) -- तीव्र विस्फोटक, युद्धका लागि
4. [[पिक्रिक अम्ल]] -- तीव्र—तीव्र विस्फोटक युद्धका लागि
5. [[अमोनियम नाइट्रेट]] -- तीव्र—तीव्र विस्फोटक युद्धका लागि
6. [[धूमहीन चूर्ण]] -- मंद—मंद विस्फोटक, युद्धका लागि
7. [[कालोचूर्ण]] वा [[बारूद]] -- मंद—मंद विस्फोटक, शान्ति र युद्ध दुइटैका लागि
8. [[मर्करी फल्मिनेट]] --- सहायक विस्फोटक, युद्धका लागि
9. [[लेड ऐज़ाइडऐजाइड]] --- सहायक विस्फोटक, युद्धका लागि
[[डायनामाइट]]का निर्माणमा नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त हुन्छ। नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यकतादेखि अधिक सुग्राही हुन्छ। यसको सुग्राहितालाई कम गर्नका लागि कीज़लगरकोकीजलगरको उपयोग हुन्छ। अमरीकामा कीज़लगरकाकीजलगरका स्थानमा काठ ्धूलो, वा काठ समिता र सोडियम नाइट्रेटको उपयोग हुन्छ। डायनामाइटमा नाइट्रोग्लिसरीनको मात्रा 20, 40, वा 60 75 प्रति शत रहन्छ। यसको प्रबलता नाइट्रोग्लिसरीनको मात्रामा निर्भर गर्दछ। 75 प्रतिशत नाइट्रोग्लिसरीन वाला डायनामाइट प्रबलतम हुन्छ। कीज़लगरकीजलगर, वा काष्ठचूर्ण, वा समिताका प्रयोगको उद्देश्य डायनामाइटको संरक्षण हुन्छ,, ताकि यातायातमा त्यो विस्फुटित न हो जाए। नाइट्रोग्लिसरीन 13 डिग्रीसे मा जम जान्छ। जम जानमा यो विस्फुटित हुँदैन। अत: ठंढी जलवायुमा जमकर त्यो निकम्मा न हो जाए, यसदेखि बचानका लागि त्यसमा 20 भाग ग्लिसरीन डाइनाइट्रोमोनोक्लो-रह्योइड्रिन मिल्योइन्छ। यो जमावरोधीकारकको काम गर्दछ। यस ससे नाइट्रोग्लिसरीन -30 डिग्रीसे सम्म द्रव रहन्छ। नाइट्रोग्लिसरीनका स्थानमा नाइट्रोग्लाइकोलको उपयोग अब हुने लगा हो।
[[विस्फोटक जिलेटिन]]मा 90 प्रतिशत ग्लिसरीन र 10 प्रतिशत नाइट्रोसेलुलोस रहन्छ। टी एन टी ट्राइनाइट्रोटोल्विन हो। यो 81 डिग्रीसे मा पिघल्दछ। डी एन टीका साथ अमोनियम नाइट्रेटका मिले रहनाले टी एन टी अधिक प्रबल विस्फोटक हुन जान्छ। पिक्रिक अम्ल विस्फोटक हो। फिनोलका नाइट्रेटीकरणदेखि यो बन्दछ। यो पहेंलो ठोस छ, जो 121 डिग्रीसे मा पिघल्दछ। यसको सीस लवण पिक्रिक अम्लदेखि5गुना अधिक सुग्राही हुन्छ। स्वय पिक्रिक अम्ल खोलमा भरिन्छ। अमोनियम नाइट्रेट टी एन टीका साथ मिलाएर प्रयुक्त हुन्छ। यो आक्सीकारकको पनि कार्य गर्दछ। स्वयं यो कठिनतादेखि प्रस्फोटिन (detonate) हुन्छ।
विस्फोटकहरुको क्षमता दुई बातहरु, प्रस्फोटको तीव्रता र प्रस्फोटका संचारणका वेगमा निर्भर गर्दछ। यी दुइटै गुणहरुमा नैं छिन्न भिन्न गर्ने क्षमता आधारित हु्न्छ। तीव्रता ग्यासहरु र ऊष्माका उन्मुक्त भएमा निर्भर गर्दछ। यसका लागि विस्फोटकका एउटा ज्ञात भारको सीस निपिण्ड (block)को गुहामा राखेर, विस्फुटित गर्दछन्। यसदेखि सीस निपिण्डको गुहाको उत्तनन (distension) हुन जान्छ। गुहाका आयतनको माप विस्फोटकको प्रबलताको माप हो। एउटा अर्को विधिमा 500 पौण्ड मर्टर (साना तोप)लाई लोलकका रूपमा लटका्दछन् र त्यो भन्दा 36 पौण्डको गोला छोड़्दछन्। यसदेखि मर्टरको प्रतिक्षप (recoil) हुन्छ। मर्टरको यही प्रतिक्षेप प्रबलताको माप हो। दुइटै विधिहरुदेखि प्राय: एकदेखि नैं परिणाम प्राप्त हुन्छन्। कठोर चट्टानहरुलाई उड़ानका लागि प्रबल र उच्च वेगभएका विस्फोटकहरुको आवश्यकता पर्छ र कम कठोर चट्टानहरुका लागि कम प्रबल र मंद वेग भएका विस्फोटकहरुदेखि काम चल जान्छ।चल्छ। विस्फोटकका महत्वको एउटा गुण त्यसको सुग्राहि्दछ। सुग्राहिताको परीक्षण विस्फोटकमा भार गिराएर गरिन्छ। जति नैं अधिक उचाईदेखि गिरकर त्यो विस्फुटित हुन्छ, उति नैं कम सुग्राही त्यो हुन्छ। जो विस्फोटक कोइलाको खानीहरुमा व्यवहृत हुन्छन्, तिनको परीक्षण एउटा विशेष प्रकारदेखि हुन्छ, क्योकिं कोइलाको खानीहरुमा ज्वलनशील ग्यासहरु रहनसक्छन्। यस्तो ग्यासहरुमा जो विस्फोटक विस्फुटित छैनते, ती नैं खानीहरुमा प्रयुक्त हुन्छन्। यस्ता विस्फोटकहरुको ज्वाला साना र अल्पकालिक हुन्छ। ज्वालाको लंबाई र समयावधि फोटोग्राफीदेखि नापी जान्छ। बारूदको समयावधि 0.077 सेकण्ड र ज्वालाको लंबाई 110 मिमी. (100 ग्राम का) तथा गनकॉटनगनकटन (guncotton)को समयावधि 0.0013 सेकण्ड र ज्वालाको लंबाई 97 मिमी. हुन्छ। पिक्रिक अम्ल अमोनियम नाइट्रेटको समयावधि एवं ज्वाला लंबाई यसदेखि धेरै साना हुन्छ। गनकॉटनकोगनकटनको तोपकक्षमा विस्फुटित गर्नको लागि प्रति वर्ग इंच लगभग3टनको दबाव उत्पन्न हुन्छ।
रेशेका रूपमा नाइट्रोसेलूलोस (गनकॉटनगनकटन) उच्च विस्फोटक हुन्छ, परन्तु जिल्लाहरुटनीकृत हुनमा मंद विस्फोटक बन्न जान्छ। अकेले वा अन्य पदार्थहरुका साथ मिलाएर, यही प्रधानतया मंद विस्फोटकका रूपमा व्यवहृत हुन्छ। गोलीका खोलमा टी एन टी, वा एमेटोल (टी एन टीका साथ एमोनियम नाइट्रेट मिल्यो भयो), पिक्रिक अम्ल, वा यसका लवण, रहन्छन्। यसको काम हुन्छ निदिष्ट स्थानमा पुगकर, तीव्रगामी टुक्नमा चूर चूर हो जाना र वास्तविक मिसाइल वा अस्त्र बन जाना। खोलमा रोज़िनरोजिन वा बारूददेखि बँधा भयो गहरुद रहन्छ। यस्ता खोललाई "श्रेप्नेल शेल" (Shrapnel shell) भन्दछन्। गहरुदका स्थानमा युद्ध ग्यास पनि रह सगर्छ। खोललाई पली्दै (fuse) द्वारा जलाइन्छ। खोल इस्पातको बनाएको हुन्छ। बहुधा त्यसमा ऐलुमिनियमको तिखो धार लागेको हुन्छ।
विस्फोटकमा प्रयुक्त हुने नाइट्रोसेलुलोजमा नाइट्रोजन 12.8 प्रतिशत रहन्छ। राख्नमा धूमहीन चूर्णको ह्रास हुन्छ। अत: बीच बीचमा त्यसका परीक्षण गर्दै रहना आवश्यक हुन्छ। कॉर्डाइटमाकर्डाइटमा नाइट्रोसेलुलोज र नाइट्रोग्लिसरीन दुइटै रहन्छन्। इनकी आपेक्षिक मात्रा निश्चित छैन रहती। एउटा कॉर्डाइटमाकर्डाइटमा नाइट्रोसेलुलोज 65 भाग, नाइट्रोग्लिसरीन 30 भाग र खनिज जेली 0.5 भाग रहन्छन्। एउटा अर्का कॉर्डाइटमाकर्डाइटमा नाइट्रोसेलुलोज 37 भाग, नाइट्रोग्लिसरीन 58 भाग र जेली 0.5 भाग रहन्छन्। ऐसीटोन ्जिलेटिनीकारकका रूपमा प्रयुक्त हुन्छ। पोटैशियम क्लोरेट, पोटैशियम परवलोरेट, नाइट्रोग्वेनिडिन, मर्करी फल्मिनेट, लेड ऐज़ाइहऐजाइह, नाइट्रो स्टार्च, द्रव अक्सीजन र काष्ठ कोइला पनि विस्फोटकका रूपमा प्रयुक्त हुन्छन्।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/298082" बाट अनुप्रेषित